Akhriso: waxa ay isku afgarteen wasiirka waxbarashada Soomaaliya iyo Guddi katirsan Aqalka Sare – Bandhiga
Akhriso: waxa ay isku afgarteen wasiirka waxbarashada Soomaaliya iyo Guddi katirsan Aqalka Sare
Guddiga horumarinta adeega Bulshada,arrimaha bini-aadanimada,warfaafinta iyo dhaqanka Golaha Aqalka sare ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa kulan la qaatay Wasiirka Waxbarashada Xukuumadda Soomaaliya Mudane Cabdullaahi Goodax Barre.
Wasiir Goodax Barre ayaa warbixin ku aadan horumarada iyo wixii u qabsoomay Wasaaradda Waxbarashada mudada uu joogay siiyay Guddiga horumarinta adeega Bulshada,arrimaha bini-aadanimada,warfaafinta iyo dhaqanka Golaha Aqalka sare,waxaana Wasiirka su’aalo laga weydiiyay arrimo badan oo quseeya wasaaradda.
Wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Mudane Goodax Barre@Bandhigamedia.com
Mudane Cabdullaahi Goodax Barre ayaa ku dheeraaday ka hadalka warbixinta Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Soomaaliya wixii u qabsoomay,waxa u dhiman iyo halka ay hiigsaneyso.
Sidoo kale,Wasiirka Waxbarashada Soomaaliya ayaa sheegay in Guddiga ay daneynayeen iney xog ogaal u noqdaan mashaariicda waxbarasho meelaha ay ka socdaan,tacliintya sare ee jaamacadaha,dhaqanka,Hidaha,heerarka waxbarasho ee federaal.
Gudoomiyaha Guddiga horumarinta adeega bulshada ,arrimaha bini’aadanimada ,warfaafinta iyo dhaqanka golaha Aqalka sare BFS Axmed Macallin axmed (Nadiir) ayaa wasiirka uga mahadceliyay warbixinta faah faahsan ee xaga waxbarashada ee gudiga uu siiyay.
Gudiga horumarinta adeega bulshada ,arrimaha bini’aadanimada ,warfaafinta iyo dhaqanka golaha Aqalka sare BFS iyo Wasaarada waxbarashada xukuumada Federaalka soomaaliya waxey isku afgarteen iney si hufan u wada shaqeeyaan.